C/raxmaan C/shakuur "Maalmahan Villa Somalia waxaa ka socda kulamo lagu doonayo muddo kororsi" - Jowhar Somali news Leader
Home News C/raxmaan C/shakuur “Maalmahan Villa Somalia waxaa ka socda kulamo lagu doonayo muddo...
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa sheegay inuu jiro kulamo ka socda Villa Somalia oo u dhaxeeya afar nin oo ay muddo kororsi ku raadinayaan.
Qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay ayuu kaga hadlay wararka maalmaha isa soo taraya oo ku saabsan in Madaxtooyadu raadineyso muddo kororsi labo sano ah, iyadoo habeen ka hor uu dhacay kulan dhex maray Labada Guddoon ee Baarlamaanka, Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.
“Maalmahan Villa Somalia waxaa ka socda kulammo u dhexeeya afar nin oo muddo xileedkoodii dhammaad ku dhow yahay, Waxay isku sheegeen in ay muddo kororsi sameystaan, Guddiga Madaxa-bannaan ee Doorashooyinkuna u xalaaleeyo”ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur.
C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay in Madaxweynaha uu hormuud u yahay arrinta ku saabsan muddo kororsiga looga hadlay shirarka ka socda Villa Somalia.
Waxaa uu sheegay in ku talagalka uu yahay haddii ay arrintan ay isku raacaan Madaxda ugu sareysa dalka iyo Wakiilka Midowga Afrika Madiera aan cid kale loo baahnaan doonin, iyadoo ay diidan yihiin xitaa Maamul goboleedyada iyo Xisbiyada Mucaaradka
“Madaxweynaha oo arrinkaan hormuud u ah ayaa la waydiiyey sidee muddo kororsi ku dhacayaa iyadoo ay gobolladii iyo xisbiyadii mucaaradka diidan yihiin. Wuxuu ku jawaabay hadii aan afarteenaan iyo adeer Madeira isku raacno cid kale looma baahna”ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur.
Hadalka C/raxmaan C/shakuur ayaa u muuqday mid uu digniin ugu dirayo Madaxda dowladda inay muddo kororsi iskood sameystaan oo ay diidana dastuur iyo doorasho.